भारतमा कोभिड–१९ बाट दैनिक सङ्क्रमितभन्दा निको हुनेको सङ्ख्या बढी : RajdhaniDaily.com
Home विदेश भारतमा कोभिड–१९ बाट दैनिक सङ्क्रमितभन्दा निको हुनेको सङ्ख्या बढी
नयाँदिल्ली । भारतमा कोभिड–१९ बाट दैनिक सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या भन्दा निको हुनेको सङ्ख्या बढी भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार जानकारी गराएको छ ।
विगत चारयता सङ्क्रमितको सङ्ख्या लगातार निको हुनेकोभन्दा कम आउनुले सङ्क्रमण दर कम हुँदै जाने विश्वास स्वास्थ्य विज्ञहरूले लिएका छन् । दश राज्यमा निको हुनेको सङ्ख्या ७१.१६ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले देखाएको छ
आर्थिक समृद्धिको दिशामा वर्तमान अवस्था
बिचार डा. सुमनकुमार रेग्मी - April 27, 2021 0
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० (३) मा अर्थतन्त्रको मोडेलबारे सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रका सहभागिता तथा विकासमार्फत...
प्रदेश १ एजेन्सी - July 26, 2020 0
इलाम । इलाममा छ जना सुरक्षाकर्मीसहित नौ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । त्यसमा पाँच जना सशस्त्र प्रहरी छन् भने एक जना नेपाल प्रहरीका...
Breaking News एजेन्सी - July 3, 2020 0
प्रदेश ७ एजेन्सी - November 16, 2020 0
प्रदेश एजेन्सी - March 12, 2020 0
प्रदेश एजेन्सी - June 16, 2020 0
कला एजेन्सी - March 17, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको अध्यक्षमा दिनेश सिटौला निर्वाचित भएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी डब्बु क्षेत्रीलाई ३१ मतले पराजित...
Editor-Picks एजेन्सी - March 27, 2020 0
काठमाडौं । चीन सरकारले दिने चिकित्सा सामग्री तातोपानी नाका हुँदै आज नेपाल आइपुग्ने तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चीनतर्फको नाका खोल्ने निर्णय...
भर्खरै एजेन्सी - June 20, 2020 0
Not-to-be-missed एजेन्सी - March 15, 2020 0